Welcome to baidoanews.com | Muqdisho :Guri kuyaala Magaalada Muqdisho oo qarax lala eegtay.
Muqdisho :Guri kuyaala Magaalada Muqdisho oo qarax lala eegtay.
Sunday February 03, 2013 - 09:39:47 in Wararka by
Sida ay sheegayaan wararka aan ka heleyno Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa xaley qarax uu ka dhacey qeybo ka mid ah Magaalada Muqdisho kaasi oo lasoo sheegayo inuu geystay qasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ah.
Qaraxa uu ahaa Bamka gacanta laga tuuraha ah ayaa waxaa lagu weeraray saldhig ciidamada Dowlada Soomaaliya ay ku leeyihiin Degmada Yaaqshiid gaar ahaana Xaafada Towfiiq ee Magaalada Muqdisho,hase ahaatee Bamkii ayaa inta uu ag marey saldhiga waxaa uu ku dhacay Guri ay degan yihiin dad rayid ah.
Guriga ku dhegan saldhiga Degmada Yaaqshiid oo ay deganaayen dadka rayid ah ayaa lasoo sheegayaa inuu qasaaro kala duwan kasoo gaarey Bamka Saldhiga loo wadey ee Gurigooda ku dhacay,waxaana inta la xaqiijiyey qaraxaasi ku dhintey hal ruux halka 4 kalena ay dhaawacmen.
Dadka dhimashada iyo dhaawaca kasoo gaartey Qaraxa xaley ka dhacay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa la sheegay iney ahaayeen dhamaantooda dad isku qoys ahaa,waxaana dhaawacyada markiiba loola cararay xarumaha Caafimaadka ee Magaalada Muqdisho.